Waa maxay kuleylka kuleylka | Saadaasha Shabakadda
Waxay umuuqataa in todobaadkan wixii loogu yeero iyo maalmo eey cabsi badan ay aakhirkii yimaadeen, markaa waxaad u baahan doontaa inaad isku hubiso dulqaad iyo soo jiido marawaxadaha iyo hawo-qaboojiyeyaasha si aad ugu adkeysan karto qiimayaasha kuleylka sare ee noocaas ah.
Kuleylka kuleylka waxaa loola jeedaa waqtiga ugu kulul sanadka iyo kaas heerkulku wuxuu dhaafi karaa barafka 4 darajo fudayd.
Marka loo eego tirakoobyada kaladuwan, mowjadaha kuleylku waa xilliga ugu kulul sanadka halkaasoo heer kulku gaaro qiyamka ugu sarreeya. Muddada muddadan waxay badiyaa socotaa laga bilaabo Luulyo 15 illaa Ogast 15, in kasta oo ay badanaa kuxirantahay deegaan kasta. Ma jiro taariikh sax ah oo ay bilaabmayso taasna waxaa u sabab ah dhawr arrimood sida xaqiiqda ah in Qorraxdu aad u sarrayso horraanta xagaaga ama shucaaca qorraxda ee keena in Dhulku kululaado.
Sidan oo kale kuleylka wuxuu ka bilaabmayaa Spain, halka qeybaha kale ee Yurub ama Afrika horayba looga sii socdo. Inta lagu jiro mudada kuleylka uu soconayo, hawo diirran oo qalalan hawada ka timaadda Waqooyiga Afrika ayaa sida caadiga ah loo soo saaraa si joogto ah. Xaaladahan oo kale waxaa muhiim ah in la qaado taxaddar taxane ah si looga fogaado istaroogga kuleylka khatarta ah maadaama ay mararka qaarkood sababi karaan geerida qofka ku dhaca.
Marka loo eego saadaasha cimilada, mowjadadan kuleylka ah waxay socon doontaa seddex ilaa 4 maalmood oo leh heerkul ka sareeya 40 darajo. Si kastaba ha noqotee kuleylka ayaa halkan u jooga inuu joogo iyo Waxaa jira aagagga jasiiradda oo heerkulka celcelis ahaan toddobaadyadan uu noqon doono ku dhowaad 38 digrii. Marka la eego xaqiiqooyinkan, waxa kaliya oo hadhsan in aad si fiican u qaboojiso oo aad naftaada uga ilaaliso inta ugu badan ee suurtogalka ah kuleylka aadka u sarreeya ee caadiga ah xagaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Waa maxay kuleylka